Dib ugalaab lambarka sirta ah 'GRUB' (Debian) | Laga soo bilaabo Linux
Maalin dhaweyd waxaan ka shaqeynayay dayactirka qaar ka mid ah mashiinnada farsamada (VM, Mishiinka Farsamada) oo ay igu dhacday in aanan xasuusan password de Root mana ka imaado isticmaale kale. Oh! Ii liitaa, maxaa jahwareer igu dhacay! ! Maxaan sameeyay !? Goorma ayaan badalay furaha sirta ah ee aanan xasuusan? Kadib fikradaha qaar ayaa raacay oo aanan tarmi karin laakiin waad qiyaasi kartaa ...
Raadinta baloogga waxaan ka helay qoraal duug ah saaxiibkay faahfaahsan waayo, Badal ereyga sirta ah ee Debian / LMDE. Nasiib darrose aniga ima aysan shaqeynin, markaa waa tan qaab kale.
Si aan u keydiyo furayaheyga sirta ah waxaan adeegsadaa, ka dib talo soo jeedinta saaxiibkey Facundo, ka KeePassX isticmaale aad u fiican iyo maamulaha ereyga sirta ah oo ah iskudubbarid iyo dabcan Software Bilaash ah!
Waa hagaag, xaqiiqadu waxay tahay inuusan xusuusan furaha sirta ah iyo sidoo kale kan uu ku keydiyay KeePassX ma aysan u shaqeyn, isticmaale kasta. Marka kadib markaan ka tanaasulay isku dayga kun iyo hal fure oo maskaxdayda ka gudbay waxaan kaliya uqaatay inaan sameeyo dib udajinta password de Root ka GRUB gacaliyahayga Debian.
1 Tafatirka xulashooyinka GRUB
2 Ka saarida erayga sirta ah
Tafatirka xulashooyinka GRUB
Nidaamku waa mid fudud oo waxa kaliya ee aan u baahanahay waa inaan helno GRUB rakibay (maaha in la xuso inay tahay inaan helno fursad aan ku aragno mashiinka mashiinka, sax?). Xaaladdayda, waxaan ku xiriiray maareeye (Waxaan haystaa VM-yada leh KVM) oo dib u kiciyay mashiinka, laakiin tani sidoo kale waxay u shaqeysaa mashiin dhab ah.
Marka markaa GRUB bilaabaan waa inaan wax ka bedelno xulashooyinka kabaha adigoo riixaya furaha e.
Fursadaha GRUB wax ka beddel
Hadda waa inaan wax ka beddelno xulashooyinka uu nidaamku ku bilaabmayo. Waxaan u dhaqaaqeynaa xariijinta culeyska nidaamka hawlgalka. Waa khadka ka bilaabma Linux:
echo 'Loading Linux 3.2.0-4-amd64 ...' Linux /vmlinuz-3.2.0-4-amd64 xididka = / dev / mapper / seacat-root ro aamusnaan
Maxaa ka dambeeya vmlinuz waxay ku xirnaan doontaa nooca xabagta ay rakibeen. Iyo sidoo kale waxa soo muuqda kadib xididka = waxay ku xirnaan doontaa sida aad nidaamka kuugu rakibtay adiga filesystems.
Oo waxaan ku darnaa:
Ka taxaddar maxaa yeelay dhab ahaantii khariidadda kumbuyuutarku waa Ingiriis ahaan asal ahaan annagana annagoo ku hadleyna Isbaanishka wuxuu beddelayaa astaamaha qaarkood.
Ereyga ka dib xasilloon. Khadku waa inuu noqdaa:
Baarka dambe ee aad ku aragtay sawirka wuxuu si toos ah ugu muuqanayaa inuu muujinayo in waxa hoos ku qoran ay qayb ka yihiin isla safkii hore.
Marka tan wax laga beddelo, waa inaan bilownaa mashiinka. Sida ku cad sawirka, leh Ctrl+x o F10 waxaan ku bilaabaynaa nidaamka xulashooyinkaan.
Tani waxay soo celin doontaa qolof oo waan tafatiri karnaa feylka / iwm / hooska.
Ka saarida erayga sirta ah
Shell ka dib markii tafatirka GRUB.
Maaddaama aanan haysan nidaam si buuxda u shaqeynaya, waxaan arki doonnaa taas kiiskan bash waxay tuuraysaa cayayaanka qaarkood runtiina ma nadiifinayso shaashadda sidoo kale. Laakiin dhib malahan, maxaa yeelay waxa aan u baahanahay ayaa nagu filan.
Sadarka afaraad ee sawirka, jawaabta ayaa u muuqata sida soo socota:
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan dib ugu laabano filesystems si ay u leedahay rukhsad qoris. Taas waxaan u fulineynaa:
Hadda haa, waan sii wadi karnaa inaan wax ku saxno nano faylka / iwm / hooska.
Markaanu furno nano waxaa suuragal ah in waliba khaladaadka qaar na tuuro. Laakiin xisaabta kuma darsaneyno oo waan riixeynaa Ku qor waan sii wadaynaa.
Faylka / iwm / hooska sadarka koowaad waxaad kuheysaa macluumaadka xidid. Khad kasta waxa aan u leenahay beero dhowr ah kuwaasna waxaa loo kala saaray laba dhibcood (:).
Goobta koowaad waxay u dhigantaa magaca isticmaalaha, qaybta labaadna waa haash u dhiganta kan password. Waxa ay tahay inaan sameyno waa inaan tirtirno dhammaan astaamaha si markaa ay u ahaato la'aan password de xidid. Sida sawirka ka muuqata:
Wax laga beddelay / iwm / faylka hooska oo aan lahayn lambarka sirta ah.
Waxaan ku keydinaa faylka Ctrl+o oo waxaan uga tagnay nano Ctrl+x. Hadda waa inaan kaliya dib u bilownaa mashiinka. Markuu nidaamku na waydiiyo inaan soo galno waan soo gali karnaa sida xidid adigoon galin midna password.
Sidii aan u bilownay qolof aan "sifiican logu xirin" si aan dib ugu bilawno mashiinka waa inaan sameynaa dib u dajin adag, taasi waa, riix batoonka dib-u-dejinta ama kiiskeyga dir Dib u soo Celinta Xoog.
Soo gal aan lahayn ereyga sirta ah
Marka nidaamku bilowdo, waxaan galnaa sidii xidid hadana waan ordi karnaa passwd mid cusubna waanu dejinay password de xidid:
Waxaan rajeynayaa inay u adeegtay!
Bogga Rasmiga ah ee KeePassX
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Dib ugalaab lambarka sirta ah 'GRUB' (Debian)
Tani waa mid ka mid ah walxaha ay tahay inaad gacanta ku hayso, waayo markay masiibo dhacdo. Taasi ha dhawaato ama ha dheeraato!
Waxaan ku xaliyay qaab aad u la mid ah, laakiin aniga oo aan taaban taabashada hooska. Boggeyga waxaan kuugu sheegayaa sidaan ku sameeyay.
HELLO LITOS, WAAN KA MAGAFANAY BOGGAAGA !!!!
Tuto aad ufiican. Waan ka helay sida aad ugu dhaqaaqday dib u dejinta erayga sirta ah.
Kani waa khayaano nabadgelyo xumo !!!… .hadday shaqayso.
Sidee loo sameeyaa si looga fogaado? Ma haysaa wax fikrado ah?
Maaha fashilaad xagga amniga ah, waa hab looga soo kabto nidaamka dhibaato aad u daran sida in la illaabo erayga sirta ah.
Sababtaas awgeed, CPD-yada ayaa xaddidan marin-u-helitaankooda, si looga hortago inaad ku dhex-dhexaadiso xanaaqa. Laakiin haddii aad horay u aragtay in tani aysan ku filneyn ama marin u helista aan la xadidi karin, markaa waa inaad ilaalisaa xanaaqa
Is daji, nolosha waxba lama hubo! Kaliya waa inaad ka feejignaataa wax walba, cusbooneysiisaa, kormeertaa! 🙂
Waan ku raacsanahay lammaanaha, tani waxay u oggolaaneysaa qof walba inuu soo galo kombuyuutarradeena, dhab ah, sax?
Cillada amniga? Waxay u egtahay inaad dhahday ikhtiyaarka dib u celi ereyga sirta ah emailkaagu khatar buu ahaa.
ka dib kala-soocii caadiga ahaa, iyo ku-duubista qayb ka mid ah / faylalka macluumaadka shakhsiyeed, kala-saarista / xididka / guriga / usr / var / boot iyo dhibco badan oo buuro ah oo ay hadda ku jiraan hal qayb.
Jose Leonel Subero dijo
Waan idin salaamay asxaabta, baloog aad ufiican iyo hage aad ufiican, waxaan rabay inaan cadeeyo in tilaabadan asalka ah @ (ma jiro): / # Mount -o remount rw / looma baahna nidaamyada ku saleysan debian iyo nidaamyo badan oo ku saleysan Red Hat, iyo in yar oo kaliya Distros ku saleysan Gentoo waa kuwa u baahan talaabadan, si fudud u socod passwd ka dib markii ay fuliyaan talaabooyinka ay tilmaamayaan inay galaan nidaamka iyada oo aan lahayn ereyga sirta ah
Jawaab José Leonel Subero
Casharbaris aad u wanaagsan, sida ay kor ku sheegaan, haddii ay dhacdo musiibo, wey damiintaa, laakiin tan marwalba waa laga fogaadaa xakameynta qalabka wanaagsan.
ugu cadcad ama calaamado = D
Marka asal ahaan haddii qof doonayo inuu galo pc-ga, waa inay dib u bilaabaan, marin u helaan, fiddle iyo voila.
Haa, ilaa aad lambarkaaga sirta ah ilaaliso Grub, kaas oo si ammaan ah loo samayn karo.
Ha baqin, haddii ninka xun uu awood jireed u leeyahay kombiyuutarka oo uu wax garanayo, waa lama huraan inuu gaaro himilooyinkiisa.
Qaabkan murugadu wuxuu ka dhigayaa waxoogaa sahlan inaad sameyso waxa aad had iyo jeer ka jaan qaadi karto live-cd / dvd.
Laakiin haddii adeegsadaha iska leh kombuyuutarka uu beddelo erayga sirta ah, wuu ogaan doonaa sababta uusan mar dambe u geli karin.
Waxyaabaha la jeexjeexay waxay noqon laheyd qof inuu ka soo duubo live-cd / dvd oo uu nuqul ka sameeyo faylka / iwm / hooska ee pendrive si uu ula baashaalo john-the-rupper kombuyuutarkooda, waa la xoqin lahaa maxaa yeelay ma ogaan doontid haddii aad xididkaaga iyo ereyada sirta ah ayaa la jabsaday.
Compa aad baad u mahadsantahay
Ku jawaab whay
Waad salaaman tahay, wixii aan ka arki karo, waxaad u maleyneysaa in qof kasta oo akhriyaya casharkaagu inuu yahay khabiir ugu yaraan ku horumarsan maaraynta Linux, laakiin ka waran hadduusan ahayn !!!!! Marka waxaan la yaabanahay waxa nano ay tahay, sidee baanse ku furaa, amarkee iyo xagee ku bixiyaa amarkaas? Faylka / iwm / hooska, halkee ayuu faylkaasi ku jiraa sideen ku tagaa galkaas si aan u awoodo waxa uu dhigayo casharradan. "EYE" Ma dhaleeceynayo casharka, si caksi ah, waa mid aad u wanaagsan, heer sare ah, laakiin sidoo kale waa inaad ka fikirtaa kuwa aan aqoon (aniga ayaan ku darraa) wax badan oo ku saabsan amar bixinta amarrada Linux. Waan sharxayaa, waxaan u qaatay in qorista nano ay furi doonto tifaftiraha wayna furtay, laakiin markaa ma aanan ogeyn sida loo tago / iwm / hooska inta aan ku jiro nano. Cudurdaarna inta kale ee isticmaaleysa, laakiin kulligeen ma nihin khubaro, inbadan oo naga mid ah ayaa kaliya bartayaal xamaasad leh…. faahfaahin dheeraad ah ... Mahadsanid ...
maanta maanta wax la mid ah ayaa igu dhacay oo waan ogaa in iyada oo loo yaqaan 'grub' la sameeyo oo i rumeyso dhowr jeer oo aan sameeyay laakiin aad u dhib badan
Casharkaan wuxuu si fudud ugu sharaxayaa, waan ku dabaqi doonaa hadii ay suurta gal tahay todobaadkan
waad ku mahadsantahay ka qayb qaadashadaada kun hambalyo
Ku jawaab pedrojasper
BUE - NÍ - HAA - MO.
Waxay iga badbaadisay dib u habeynta Debian.
Tani sidoo kale waa run Debian 8, taas oo ah waxa aan ku tijaabiyay.
Iima aysan shaqeeyn aniga, wali waxaan haystaa dhibaato isku mid ah, ma ogi hadii aan arko xaqiiqda ah in aan ku rakibo debian qaab muuqaal ah feykalka, waxaan jeclaan lahaa inaad i caawiso: /,
Ku jawaab Jeane
Wanaagsan! Waxaan ku xardhay qoraal debian 8 ah wuuna igu dhacay markaan hilmaamay baaska. Waan ku raacsanahay inaysan ahayn "Fashil", sikastoo ay ahaato waxaan u maleynayaa in nidaamyada amniga ee ay soo jeedinayaan ay aad u xoogan yihiin. Isticmaalaha shakiga qaba, si fiican, halkii uu ka odhan lahaa "waxaad u malaynaysaan inaan dhammaanteen khubaro nahay", si fudud ayaan shaki u gelin karaa, anigoo aan u eexanayn;
Aad baad ugu mahadsantahay wadaagistaada!
ps: Waa inaan fuliyaa tallaabada buurta, waxaan ka tifatiray baaskeyga kumbuyuutarkeyga yar yar, hehe, laakiin weli waa inaan galo xulashooyinka murugada leh si aan u adeegsado passwd (no way!)
Ku jawaab hmamani
Waad salaaman tahay, marka hore, aad baad ugu mahadsan tahay wax ku biirinta waa waxa aan u baahanahay inaanan dib u dhigin Debian 8, laakiin waxaan heystaa dhibaato aad u daran, iyo in markaan sameeyo howsha oo dhan oo aan ku bilaabo habka bash-ka ah OS ma shaqeynayo Kiiboodhka ... mana ogaanayo, laydhadhka kumbuyuutarkuna ma shaqeeyaan ama waxba haba yaraatee, sidaa darteed waxba kama beddeli karo habka xididka bash.
PS: maxaa u qalantaa inaan dhibaato la mid ah la kulmay markii aan debian debian, ku rakibay wiishka bootka qayb kale oo madaxbannaan iyo debian qayb kale, waxaan horey u soo maray tan ka hor nidaamyo kale mar walbana way ii shaqeyn jirtay. la debian ma, iyo esque markii debian bilaabay kaliya rakibay interface ah garaafka ma uusan u shaqeyn keyboard ama jiirka, kaliya marka ay tahay inaad dhigto furaha si aad u bilowdo fadhiga.
WAAD KU MAHADSAN TAHAY IN AAD TAHAY CAAWIN KUWA KALE, SALAAN.
Aad baad ugu mahadsantahay wax ku biirinta. Xal degdeg ah oo wax ku ool ah 😉
Ku jawaab MEDB
Celeste de la Lime dijo
Mahadsanid! Waad i badbaadisay! ; D
Jawaab Celeste de la Cal
hello qofkasta oo aan ubaahanahay caawimaad Waxaan sameeyay howsha oo dhan ilaa meeshii aan ku qori lahaa r Mount -o remount rw / laakiin mid ka mid ah waxyaabihii ayaa khaldamay, ka dibna waan isku dayay laakiin waxay kaliya gaareysaa ilaa meeshii aan ku qoro init = / bin / bash waxaan siiyaa ctrl + x, halkaasna xarafyada qaar ayaa ka soo baxa, si dhakhso leh ayey u dhaafaan laakiin ma gaarto shaashadda r Mount -o remount rw / maxaan sameeyaa?
Aad baad ugu mahadsan tihiin casharradan, runtii waxtar weyn bay ii ahayd aniga, debian 9 iima oggolaanaynin inaan u galo sidii isticmaale xidid tanna waa lagu xaliyay, markale ayaan mahadsanid.
Ku jawaab goth14wx
Si fiican ayuu u fiicanyahay Tuto waxaad tahay capo!
Waxaan isku dayay inaan adeegsado qaabkan laakiin aniga ima aysan ii shaqeyn.
Dhibaatadu waxay tahay, in kasta oo aan tafatiri karno feylka "hooska", ma keydin karno. Tafatirid iyada oo aan mudnaan la helin waxay ku fureysaa qaab aqrin-keliya ah.
Ku jawaab Bastian
[xigasho] Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan ka fekerno nidaamka faylasha si ay u hesho rukhsad qoris. Taas waxaan u fulineynaa:
xididka @ (ma jiro): / # Buur -o remount rw / [quote]
Waxaan u maleynayaa inay tahay sababta aad ugu noqonayso fs.
Waxaan u maleynayaa inaan xasuusto in W-ga sidoo kale ay jirtay wado marin loogu helo adeegsadayaasha loona beddelo ama looga saaro erayga sirta ah, iyadoo loo marayo livecd.
Ku jawaab btzk
Waxaan u gudbinayaa inaan uga tago mahadnaqdayda, sida ku habboon. Waxaad iga soo saartay dhibaato weyn. Waxaan hubiyey baloogyo kale xalkuna wuxuu ahaa midka ugu dhameystiran uguna sharraxsan.
5 sababood oo loo qaato Naqshadaynta Jawaabta sanadka 2014